Homeसमाचारअन्जली अधिकारीको आज सम्मकै फरक अ’भिनय, गायिका शान्ति श्री परियारको स्वरमा यस्तो गीत ( भिडीयो सहित )
March 4, 2021 admin समाचार 5630
आखिर प्रेमनै सबै भन्दा ठुलो रहे’छ। आमा बुवाको प्रेम अनि आन्तरिक प्रेममा निकै फर’क छ तर माया गर्ने जोडीलाई भने माया नै ठुलो रहेछ। यहि प्रेममा कतिपय सफल भ’यका छन् भने कतिपयले आफ्नो ज्यान समेत गुमा’उनु परेको हामीले सुन्न अनि देख्न सक्छौ। हुन त मायाप्रेम बिना संसार नै अधु’रो रहनछ। मिठा मिठा सपना बोकेर हिडेका ति परेवाका जोडी जस्तै एक जोडीमा घटेको घ’टना हो।
मायाले पा’गल बनायो दुरी बढायो तर माया भने उत्ति’कै रहिरहेको छ। एक अर्कालाई खो’ज्दै भौतारियाका ति नमुना जोडीले समाजबाट नै धोका पाउन पर्यो। यस्तै यस्तै घट’नाले आज कतिपय जोडीको बि’छोड भयको छ भने कतिपयले अकालमै ज्यान गु’माउन पुगेका छन्।
यस्तै घट’नालाई कल्पित गर्दै गित मा’र्फत उतारेका छन् कलाकारहरुले। लोकप्रिय गायिका शान्ति श्री परियार र गायक कुशल बे’लबासे को सुमधुर आवाजमा उनै बहु’चर्चित गायक तथा सर्जक कुशल बेला’बासेकै लय तथा शब्द सि’र्जनामा एक हृदयाबिदारक कथामा आधारित लोक गित हातैको पन्जाले बजारमा सार्बज’निक भयको छ।
भिडियो तर्फ प्रकाश भट्टले नि’र्देशन गरेका छन् भने नवराज उप्रेतीले छायां’कन गरेका छन् र बिष्णु शर्माले उक्त भिडियो सम्पा’दन गरेका छन्। उक्त भिडियोमा ओबी रायमाझी र अन्जली अधिकारीको मन छुने अभि’नय रहेको छ।
उक्त गीतलाई नवराज पन्तको आधि’कारिक युटुब च्यानल मार्फत बजारमा सार्ब’जनिक गरियको छ। बिछोडियका जोडीको मि’लन भयो कि भयान होला ? आखिर कहिले सम्म यस्तो समस्यामा अल्झ’नु पर्ने साचो माया गर्ने जोडी ?
करोडौंको सम्पति भएका दम्पतीलाई आफ्नै छोराले सबै सम्पति ह’डपेर सडकमा पुर्‍याए पछि, आमा यसो भन्छिन्: (भिडियो सहित)
प्रधानमन्त्री ओली र विप्लव भोलि एकै म’ञ्चमा देखिने
चुकन्दर खाँदा हुने फाईदाहरु, जस्ले शरीरमा लाग्ने यी रोगहरुलाई गर्दछ नि’यत्रण
November 30, 2020 admin समाचार 10517
चुकन्दर मि’ठो जरा भएको फल र तरका’रीमा पर्दछ । यसलाई सलाद बनाएर पनि खान सकिन्छ भने तरकारीको रुपमा पनि यसलाई प्र’योग गर्न सकिन्छ । यसको स्वाद सबैले मन परा’उँदैनन् । चुकन्दर स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदाज’नक
भका भक म’र्न थाले टर्की कुखुरा , देखिन थाल्यो यो रोग , सा’बधान रहनुहोला !
काठमाडौं फेरि बर्ड फ्लु देखि’एको छ । कीर्तिपुर नगरपालिका र चन्द्रागिरि नगरपा’लिकामा पालिएका टर्कीमा बर्ड फ्लु देखिएको हो । बर्ड फ्लु रोग पुष्टि भएसँगै त्यस क्षेत्रमा टर्की नस्ट गर्न बुध’बार बिहानैदेखि टोली खटाइएको पशु सेवा
किरणको गीत ‘फेवामा टल्कियो’ मा छुल्ठिमको अहिले सम्मकै दमदार अभिनय (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 12, 2021 admin समाचार 7335
गायक तथा संगीतकार किरण मा’इकल घिमिरले फेवामा टल्कियो बोलको नयाँ गीत सार्व’जनिक गरे लगत्तै राम्रो चर्चा सुरु भएको छ । गीतमा कीरण माइकलकै स्वर र संगीत रहेको गीत लेखनमा उनलाई सुदिप आत्रेयले स’घाएका छन् ।
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनु`हुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (229859)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (226235)